Blackberry VS iPhone na Olee ka ịgbanwee si Blackberry ka iPhone
A Full Guide ka ịgbanwee si Blackberry ka iPhone
A Full Guide ka ịgbanwee si Blackberry ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5s / 5c
Ya mere ị na-achọ a ọhụrụ ekwentị ma na-adọwa n'etiti Blackberry na iPhone? Dị nnọọ nweta nkwalite blackberry na iPhone, kama ka o nwee ike na-ebufe ọdịnaya site Blackberry ka iPhone? Chọta ya ike ime mgbanwe iPhone si enwe Blackberry ruo ogologo oge, karịsịa n'ihi na magburu onwe Blackberry ozi? N'agbanyeghị nke ọ bụla bụ, m n'aka na ị ga-ahụ ihe ị chọrọ mgbe na-agụ isiokwu a.
Part 1. Nyefee si Blackberry ka iPhone
Part 2. Blackberry ngwa ọdịnala n'ihi iPhone
Part 3. Blackberry ụdaolu maka iPhone
Mgbe tụnyere, ị chọrọ okporo mmiri gị ochie Blackberry maka ihe iPhone, ma rapaara na ọdịnaya transfer? Echegbula. Ọ bụghị a nnukwu ihe dị ka tinyere dị ka i mere a ndabere gị blackberry na kọmputa na BlackBerry® Desktọpụ Software. Ke ibuotikọ emi, ga-amasị m na-egosi gị otú ị weghachite kọntaktị na ọbụna SMS si ndabere faịlụ mere site BlackBerry® Desktọpụ Software na nyefee gị iPhone conveniently na effortlessly.
Blackberry ka iPhone Nyefee, na erughị 10 mins
Weghachite blackberry ndabere faịlụ ma nyefee ya ọdịnaya ka iPhone, Android ekwentị na Nokia Symbian ekwentị na ala.
Nyefee azụmahịa na kọntaktị na onye kọntaktị site na Blackberry ka iPhone mfe.
Arụ ọrụ nke ọma na iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 3GS / 4 na-agba ọsọ iOS 9/8/7/5/6.
Otú nyefee Ndi ana-akpo na ozi ederede site na Blackberry ka iPhone
Nzọụkwụ 1. ndabere gị blackberry na BlackBerry® Desktọpụ Software
Iji malite, wụnye BlackBerry® Desktọpụ Software na kọmputa. Agba ya na-eji eriri USB jikọọ gị blackberry na kọmputa. Mgbe gị Blackberry a ghọtara na e gosiri na window, pịa Back ugbu a nkwado ndabere na mpaghara gị onwe onye data na gị blackberry na kọmputa.
Cheta na: Ikwu na nzọụkwụ mgbe i mere nkwado ndabere na mpaghara ugbua. Ọzọkwa, iTunes ga-arụnyere na kọmputa-ekwe nkwa Wondershare MobileTrans arụ ọrụ kwesịrị ekwesị.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone na kọmputa
Download na wụnye blackberry ka iPhone data transfer software na kọmputa. Jiri ihe Apple eriri USB na-esi gị iPhone ejikọrọ. Ke akpan window, gaa na Weghachi si ndabere mode na pịa ya. Na ya menu, họrọ si Blackberry ndabere faịlụ.
Nzọụkwụ 3. Copy SMS na kọntaktị site na Blackberry ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5s / 5c
Mgbe ghọtara, gị iPhone-egosi na window. Na n'aka ekpe, pịa abịazi nọdụ triangle na-egosi esiri-ala ndepụta. Họrọ Blackberry ndabere faịlụ. Mgbe ahụ, ndị niile ndabere faịlụ i ebi mere na BlackBerry® Desktọpụ Software na-depụtara si.
Họrọ gị chọrọ n'anya. Dị ka ị na-ahụ, na kọntaktị na SMS na-ticked. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ nyefee kọntaktị site na Blackberry ka iPhone, i kwesịrị uncheck SMS. Iji nyefee ma, ị nwere ike ozugbo pịa Malite Copy.
Part 2. Blackberry ngwa n'ihi na iPhone
N'ikpeazụ, ị jikwaa ịgbanwee blackberry na iPhone, ma ha adịghị achọ ịhapụ ala ọ bụla salient ngwa ọdịnala na gị Blackberry n'azụ, gụnyere Blackberry Messager ngwa, Blackberry Ringtone ngwa na ndị ọzọ. Otú ọ dị, ngwa ọdịnala na Blackberry ekwentị na-kpam kpam iche n'ebe ndị na iPhone, olee otú ị pụrụ anọgide na-eji ọkacha mmasị gị ngwa ọdịnala na Blackberry ekwentị? Echegbula. Ebe a, m na-egosi gị ụfọdụ nchọpụta nsogbu, m atụ anya na ọ pụrụ inyere gị aka.
1. Blackberry ozi maka iPhone
Blackberry ozi, BBM maka obere, bụ nzi ozi ngwa maka Blackberry ngwaọrụ. Na ya, ị na-enwe ike ịnọgide na nso-eleta gị ezinụlọ na ndị enyi. Ọ na-enye gị ike izipu nzi ozi na video, olu Cheta na foto na-eme ka olu oku maka free. Nwee ọṅụ iji nke a na ngwa na-achọghị na-ahapụ ya n'azụ mgbe ịmafe si BlacBerry ka iPhone? Echegbula. Ị nwere ike iji blackberry ozi na iPhone enweghị ihe ọ bụla ajụjụ.
2. Blackberry ozi maka iPhone nbudata
Ka ibudata Blackberry ozi maka iPhone, i nwere ike imeghe iTunes na jikọọ na gị iPhone na kọmputa site na eriri USB. Na ekpe sidebar, pịa iTunes Store> App Store. Chọọ ọ na ibudata ya iTunes Library. Mgbe ahụ, pịa gị iPhone na-egosi ya akara panel. Pịa égwu taabụ ma wụnye ya na gị na iPhone.
3. Blackberry ozi uzo ozo maka iPhone
E wezụga kwuru ozi ngwa n'ihi na blackberry na iPhone, ebe a bụ ihe ọzọ na-ewu ewu ozi ngwa aha ya bụ WhatsApp ozi. Mgbe ọ bụla gị 3G ma ọ bụ WiFi na-ekiri na, ị pụrụ iji WhatsApp ka ederede na gị ezinụlọ na ndị enyi. Ọ na-ekwe ka ị na-eziga na-enweta ozi, photos, audio ndetu na video ozi mfe.
E wezụga Blackberry ozi na WhatsApp ozi, e na ụfọdụ ngwa ọdịnala na nwere yiri ọrụ iji mee ka gị na ezinụlọ na ndị enyi ọnụ site chat. Ha na-Kik ozi, ChatPlus, Touch ™, Hookt, Viber.
Zọpụta ọtụtụ ụdaolu na gị ochie Blackberry ekwentị na ugbu a chọrọ nyefee gị iPhone? N'ụzọ dị mwute, ụdaolu na-.mp3 formats, nke ike-kpọmkwem eji dị ka ụdaolu na iPhone. Ihe a pụrụ ime? Echegbula. Ebe a bụ ụzọ dị mfe iji nyere gị aka pụta. Soro mfe nzọụkwụ n'okpuru, na ị ga-eme ka ọ effortless.
Nzọụkwụ 1. Export ụdaolu na a Blackberry ekwentị na kọmputa na-ike a na nchekwa na-azọpụta ha. Mepee iTunes na pịa Files na-egosi ya esiri-ala menu. Họrọ Tinye nchekwa Library ... Chọgharịa kọmputa gị ga-nchekwa ebe ndị ụdaolu na-echekwa ma mbubata ha ka ha iTunes Library.
Nzọụkwụ 2. Chọta dị playlist ma pịgharịa gaa na ala iji họrọ a ringtone dị ka onye ị chọrọ iji na gị iPhone. Right pịa ringtone na ya ndọpụta ndepụta họrọ Get Info. Na mmapụta dialog, pịa Nhọrọ taabụ. Tinye Malite Time na Nso Time na nne Mmetụta ha. Mgbe ahụ, pịa OK.
Nzọụkwụ 3. Right pịa otu ringtone nke ugboro abụọ ma họrọ Mepụta AAC Version. Bu na-eme nke a, ahaziri ringtone na .m4a ga-egosi n'elu na playlist,. Ịdọrọ na dobe ya na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 4. Gbalịa ịgbanwe ya ndọtị .m4a ka .m4r. Ọ bụrụ na ị na-apụghị ozugbo ahụ ndọtị, ị nwere na-egosi na ndọtị mbụ. Pịa Malite> Control Panel. Iṅomi na ntọala ma chọta Ọdịdị na Personalization. Pịa ya na mgbe ahụ họrọ nchekwa Nhọrọ. Na mmapụta dialog, pịa View na uncheck Zoo extensions maka mara ụdị faịlụ. Pịa Mee na OK. Mgbe ahụ, ahụ exported ringtone na-agbanwe ya ndọtị .m4a ka .m4r.
Blackberry Z10 bụ a touchscreen smartphone, na-agba ọsọ Blackberry OS 10. Ọ na-enye gị download ngwa, egwuregwu, music, videos, magazin, akwụkwọ na ndị ọzọ na-atụrụ ndụ mfe. I nwere ike iri photos, edit na-eso ha na ndị enyi gị effortlessly. The touchscreen keyboard ngwa ngwa na-amụta gị dee ịke na-enye gị aro mgbe dee-enyere gị aka pịnye ngwa ngwa.
Blackberry Q10 bụkwa a touchscreen smartphone, ma ọ anya na ihe ọdịnala. Ọ na-enye gị anụ ahụ QWERTY keyboard, nke na-ahapụ ị pịnyere ihe ọ bụla effortlessly. Ọ na-enye gị mfe ohere gị email na ngwa ọdịnala na-ahapụ gị nọrọ nso nile na nke ahụ bụ dị gị mkpa. Site na iji BBM video, ị pụrụ ọbụna ịhụ onye ọ bụla ị chọrọ izute ma na-eso photos site na ihe nchọgharị.
iPhone 5, nke isii ọgbọ nke iPhone, bụ ọtụtụ thinner na nụchara anụcha. Ọ bụ na-akpa iPhone na-agba ọsọ iOS 6 na-eji A6 usoro, nke na-enye a pụtara ahụmahụ mgbe eji ya.
Chọrọ bulie a ekwentị n'etiti Blackberry Q10, Blackberry Z10 ma ọ bụ iPhone 5, ma ka na-amaghị nke na otu onye bụ mma, Blackberry Q10, Blackberry Z10 ma ọ bụ iPhone 5? Anya na mbadamba na ọ ga-agwa gị ihe kpọmkwem iche n'etiti atọ smartphones?
Ngwaọrụ ụdị smartphone smartphone smartphone
Tọhapụrụ Ụbọchị January, 2013 January, 2013 September, 2012
Akụkụ 130 x 65,6 x 9 mm 119,6 x 66,8 x 10,35 mm 23,8 x 58,6 x 7.6 mm
Size 4.2 sentimita asatọ 3.1 sentimita asatọ 4 sentimita asatọ
Mkpebi 768 x 1280 pikselụ 720 x 720 pikselụ 640x1136 pikselụ
Ihuenyo mmetụ aka Ee Ee Ee
Keyboard Ọ dịghị QWERTY Ọ dịghị
Processor 4.2 sentimita asatọ 3.1 sentimita asatọ 4 sentimita asatọ
Esịtidem nchekwa 16GB 16GB 16GB
Expandable nchekwa Ee (microSD) Ee (microSD) Ọ dịghị
Flash Ikanam Ikanam Ikanam
N'ihu-n'ihu igwefoto 2 megapixels 2 megapixels 1.2 megapixels
N'azụ igwefoto 8-megapixel 8-megapixel 8-megapixel
Ụdị Ikanam Ikanam Ikanam
Ikike 2 megapixels 2 megapixels 1.2 megapixels
Kwuoro Oge 600 min 810 min 480 min
Njikere Oge 18.300 min 21.312 min 13.500 min
Accelerometer, Gyroscope, Kompas, wdg Ee Ee Ee
Wi-Fi Ee Ee Ee
Bluetooth Ee, v 4.00 Ee, v 4.00 Ee, v 4.00
Olee otú Gbanwee si Blackberry ka Android?
Olee otú Bugharịa faịlụ site Blackberry ka Samsung?
Olee otú Detuo Data si gam akporo ka iPhone?
Otú nyefee faịlụ site iPhone ka iPhone?
The Best Free ngwa ọdịnala na iPhone?
Otú nyefee ọdịnaya site iPhone ka Android?
Olee otú ndabere Motorola Droid Razr / Moto X / XOOM
Otú nyefee kọntaktị site na iPhone ka blackberry
> Resource> iPhone> A Full Guide ka ịgbanwee si Blackberry ka iPhone